Warbixin Xiiso Leh: 7 Xiddig Oo Qarka U Saaran In Ay Ka Huleelaan Kooxda Real Madrid – Kooxda.com
Home 2017 January Spain, Wararka Maanta, Warbixino Warbixin Xiiso Leh: 7 Xiddig Oo Qarka U Saaran In Ay Ka Huleelaan Kooxda Real Madrid
Warbixin Xiiso Leh: 7 Xiddig Oo Qarka U Saaran In Ay Ka Huleelaan Kooxda Real Madrid
January 12, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda.com ayaa idiin soo diyaarisay warbixin ay ka soo xigatay wargayska As ee ka soo baxa dalka Spain iyada oo diirada ku saaraysa 7 xiddig oo qarka u saaran in ay ka huleelaan xagaaga dambe qalcada Kooxda Real Madrid ee Santiago Bernabéu.
Wargayska ayaa warbixintan ku xaqiijiyay in 5-tan bilood ee soo socda aya kooxda Muhiim u tahay iyada oo ku jirta olole ah in ay heshiisyo cusub ka saxiixato xiddigaha ugu muhiimsan kooxda xilli ay sidoo kale fasixi doonto xiddigaha aan kooxda u ciyaarin kulamo badan.
Hadaba Halkan kaga bogo xiddigaha la filayo in ay isaga caraabaan kooxda cad-cadka ee Real Madrid.
Inkasta oo uu ku jiro qaab ciyaareed aad loola dhacay hadana goolhayaha reer Costa Rica ayaa ugu horeeya magacyada uu xusay wargaysku xilli kooxda Boqortooyadu isha ku hayso goolhayaha kooxda chelsea ee Thibaut Courtois xilli sidoo kale ay jiraan warar la xiriirinaya Goolhayaha reer Milan ee Gianluigi Donnarumma.
Daafacan reer Portugal ayaa ka mid ah xiddigaha sida xooga ah ugu sharaxan in ay ka tagayaan kooxda Real Madrid xilli uu dhamaad ku dhowyahay heshiis uu xiddigani kula jiro kooxda Boqortooyada iyada oo la filayo in uu xiddigani si xor ah uga tagi doono Madrid hadii aan heshiis cusub laga saxiixiin bilaha soo socda.
Xiddigan reer Spain ayaa ku jira qaab ciyaareed aad u fiican isaga oo aanan hadana ahayn xiddig boos joogto ah ka haysta kooxda Tababare Zidane, qaab ciyaareedka xiddigan ayaa soo jiitay indhaha kooxaha caalamka taas oo cadaadis ku ah kooxda Real Madrid qasabna uga dhigi doonta in ay fasaxaan xiddigan hadii ayna boos joogto ah u hayn.
Waxa la filanayay in xiddigani kooxda caasimada isaga tago xagaagii hore marka loo eego in aanu xiddigan boos joogto ah ka haysan kooxda Laakiin xiddigan ayay u badantahay in uu isaga tago kooxda Marka la gaaro xagaaga dambe isaga oo dalabyo fiican ka haysta kooxaha ugu awooda weyn horyaalada yurub.
Waxa soo baxaya warar sheegaya in weeraryahanka reer Spain aanu ku faraxsanayn kursiga kaydka kooxda Real Madrid iyada oo wararku sheegayaan in uu xiddigani isha ku hayo in uu xagaaga dambe isaga tago kooxda Real Madrid hadii aan loo balan qaadayn in uu ahaan doono weeraryahanka 1-aad ee kooxda Boqortooyada.
Xiddigan da.yarka ah ayaa ku jira qaab ciyaareed fiican isaga oo tusay ahmiyada uu u leeyahay kooxda Real Madrid kulamadii la safay xilli kooxda Real Madrid ku qasbantahay in ay amaah u dirto si u sii wado horumarkiisa.
Xiddigan reer Portugal ayaa ku dhibaataysan kursiga kaydka kooxda Real Madird isaga oo ay yartahay kulamada uu u safanayo kooxdisa Real Madrid waxayna warku sheegayaan in uu xiddigani ku jiro maalmihiisii ugu dambeeyay ee kooxda Real Madrid.